Adeegga hagitaanka xagga horumarka qofka, waxaad hage waxbarasho- iyo xirfadeed ka heleysaa taageero ku aaddan waddadii aad shaqo ama waxbarasho u mari lahayd. Waxaad heleysaa hagitaan qof ahaaneed oo ku saabsan wixii waxbarasho iyo fursado ah ee jira. Si wada jir ah ayeynu danahaaga iyo aqoontaada xirfadeed isula darseynaa, waxaanaynu samayneynaa qorshe mustaqbal oo aad hore ugu soconeyso.
Muxuu yahay hagitaanka horumarka jidka noloshu?
Filinka waxaan uga sheekeyneynaa, waxa uu ka dhiganyahay, hagitaanka horumarka jidka noloshu iyo sida aad uga qeyb qaadan kartid.
Hagitaanka xagga horumarka qofka waxaad ku heleysaa fursad aad kaga fikirto xirfadaha aad dooran karto. Mid ka mid ah hagayaasha waxbarashada iyo xirfadaha ee qandaraaslayaasheenna ayaad ka heleysaa taageero loogu tala galay inaad ku hesho waddadaadii aad shaqo ama waxbarasho ku heli lahayd. Waxaan si wadajir ah isula diraaseyneynaa aqoonta xirfadeed ee aad leedahay iyo waxyaabaha aad ku fiicantahay, khibradaha hore ee aad leedahay iyo meelaha xirfadeed ee ay kaa anfici karaan. Inta waqtigaas lugu jiro waxaan soo saareynaa qorshe loogu tala galay mustaqbalkaaga.
Hagitaanka xagga horumarka qofka waxaa loogu tala galay adigaaga u baahan in la diraaseeyo xirfadaha kugu habboon iyo tallaabaha ay tahay in aad qaaddo si aad halkaas u gaartid. Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan karaan baraagtiik ama waxbarasho. Hagitaanka xagga horumarka qofka waxaan waafajineynaa baahiyahaaga. Haddii aanad ku hadlin af Iswiidhish, waxaad taageero ku heli doontaa afkaaga hooyo.
Waa Xafiiska shaqada cidda qiimaynayneysa in hagitaanka xagga horumarka qofku uu yahay adeeg kugu habboon.
Waxaad ka qaybqaadaneysaa hagitaanka xagga horumarka qofka in u dhaxaysa boqolkiiba 50 iyo 100. Sidoo kale hagitaanka xagga horumarka qofka waxaad tusaale ahaan la wadan kartaa, shaqo, sfi ama hawlo kale oo uu Xafiiska Shaqadu kuu diray.
Waxaad la xiriiri kartaa lataliye waxbarasho iyo xirfadeed oo tirsan mid ka mid ah qandaraaslayaashayada.
Waxaad booqasho waxbarasho ku tegi kartaa goobo shaqo iyo goobo waxbarasho. Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa dad ka sheekeynaya sida ay tahay in xirfad lagu shaqeeyo iyo habka loo marayo.
Hadafka hagitaanka xagga horumarka qofku, waa qorshe loogu tala galay inuu kuu noqdo waddo aad ku gaarto shaqo ama waxbarasho.
Waxaad adeegga ka qaybqaadanaysaa laba bilood.
Halkan ayuu ku jiraa, adeegga hagitaanka iyo horumarka qofku
Wakhti dheer bilaa shaqo ahaa
Ka qaybqaata barnaamijka saldhigashada ee dadka dalka ku cusub